Massimiliano Allegri oo sharaxay labada kooxood ee Juventus xili ciyaareedkan kula dagaalami kara horyaalka Serie A – Gool FM
Massimiliano Allegri oo sharaxay labada kooxood ee Juventus xili ciyaareedkan kula dagaalami kara horyaalka Serie A
(Juventus) 31 Okt 2018. Macalinka kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa wuxuu shaaca ka qaaday kooxaha uu arko inay kula tartami karaan horyaalka Serie A xilli ciyaareedkan Bianconeri.
Juventus ayaa ilaa iyo haatan kaga hogaamineysa kooxda booska labaad ku jirta ee Inter Milan 6 dhibcood nadiif ah kadib 10 kulan ee laga soo ciyaaray horyaalka Talyaaniga.
Hadaba Massimiliano Allegri ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu kaga hadlay labada kooxood ee xili ciyaareedkan kala kulmi karaan loolan adag wuxuuna yiri:
“Kooxaha Inter Milan iyo Napoli waxay sameeyeen kooxo ku guuleysan kara horyaalka Talyaaniga, horey ayaana u soo dagaalanay”.
“Napoli uu hogaaminayo Ancelotti waxay wali awoodaan inay u dagaalamaan ku guuleysiga horyaalka”.
“Kooxda si fiican ayay u shaqeyneysaa, taariikhdeena way cadahay, todobo horyaal Serie A ee xiriir ah ayaan kusoo guuleesanay, labo jeer ayaan gaarnay finalkii Champions League 7-dii xilli ciyaareed ee ugu danbeysay”.
“Waxaa jira horumar, waxaan u baahanahay inaan ku guuleysano Champions League, waxaan ka mid noqon doonaa musharixiinta ugu cad cad, sida Barcelona, waxaan u baahanahay inaan fiicnaano, si aan meel fiican u gaarno”.
Mid ka mid ah halyeeyada kooxda Manchester United oo talo muhiim ah u diray da’ayarka reer England Marcus Rashford
Sidee loo kala Sarreeyaa Gool dhalinta Premier League??